Ansaaru-Shareeca oo iska difaacday xamlo ay kusoo qaadeen malleeshiyaad daacad u ah Imaaraadka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Dec 11, 2018 235 0
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii malleeshiyaad katirsan Xizaamul Amniga oo taabacsan Imaaraadka ay soo weerareen deegaanno ay Mujaahidiiintu kaga suganyihiin gobolka Abyan ee koonfurta wadanka Yaman.
Malleeshiyaadka Xizaamul-Amniga ayaa soo weeraray deegaanka Fadhxaan oo hoostaga mandiqadda Muuddiyah ee gobolka Abyan, halkaas oo ay ku suganyihiin ciidamo katirsan Mujaahidiinta, waxaana dagaalka uu qaatay dhowr saacadood oo xiriir ah.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa ku guuleystay iney dilaan dhowr askari oo katirsan malleeshiyaadka Xizaamul-Amniga, iyagoona ka gubay ugu yaraan labo gaari oo noocyada dagaalka ah.
War kooban oo kasoo baxay Ansaaru-Shareeca laguna faafiyay Internetka ayaa lagu xaqiijiyay in Mujaahidiintu iska difaaceen xamaladii lagu soo qaaday, islamarkaana malleeshiyaadka Xizaamul Amniga ay dib u carareen.
Dalka Yaman, ayaa waxaa ka howlgala malleeshiyaad ka amar qaata Imaaraadka, kuwaas oo isku dayaya iney dhibaatadooda ku faafiyaan gobollada koonfurta Yaman, balse waxaa ku hor gudban ciidamada Mujaahidiinta Ansaaru-Shareeca.